Mahiga oo hoggaamiyayaasha Soomaaliya ku tirtirsiiyay in ay u hoggaansamaan xilliga kama-dambaysta ah ee 20-ka August - Sabahionline.com
Mahiga oo hoggaamiyayaasha Soomaaliya ku tirtirsiiyay in ay u hoggaansamaan xilliga kama-dambaysta ah ee 20-ka August Agoosto 17, 2012
Wakiilka Xog-hayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Augustine Mahiga ayaa hadal uu ku beegay munaasabadda Ciidul-Fitriga Khamiistii (16-kii August) waxa uu hoggaamiyayaasha Soomaaliya ku dhiiri-galiyay in ay ku sii joogaan ballantoodii ahayd in ay dhammeeyaan marxaladda ku-meel-gaarnimada.
Qaramada Midoobay oo seminaar ku saabsan haweenka siyaasadda ku jira ku qabatay Muqdisho
Soomaaliya waa in ay deg deg u dhisataa xukuumad cusub, mas'uul Midowga Yurub ah ayaa yiri
Qaramada Midoobay oo kor meereysa kulanka odayaasha dhaqanka Soomaalida
Golaha Deegaanada Qaranka Soomaaliyeed oo ansixiyay dastuurka cusub
“Taariikhdii la muddeeystay ee 20-ka August waa ay taagan tahay,” ayuu Mahiga ku yiri hadal uu soo saaray. “Jid dheer ayaannu soo marnay mana fashili karno markii ay kaliya saacado naga xigaan dhamaystirka marxaladda ku-meel-gaarnimada.”
Waxa uu sheegay in Soomaalidu la gudboon tahay in ay dib u milicsadaan horumarkii la soo gaaray, al-Shabaab waa laga saaray Muqdisho sannad ka hor magaaladuna intii xilligaa ka dambeeysay waxa soo hirgalay koboc dhaqaale iyo horumar.
Waxa uu ammaanay horumarkii dhawaan laga gaaray siyaasadda Soomaaliya, oo ay ka mid tahay ansixintii dastuurka qabyada ahaa. “Waxan ugu yeerayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed in ay ka faa’idaystaan fursaddan taagan oo ay si iskaashi leh uga wada shaqeeyaan maslaxadda dalkiinna,” ayuu yiri.